Muuri News Network » Dhageyso+Sawiro:Ururka Dhalinyarada Dulmidiid ee Dalka Sacuudiga oo ku dhawaaqay Hadal Dad Badan soo jiitay..
Dhageyso+Sawiro:Ururka Dhalinyarada Dulmidiid ee Dalka Sacuudiga oo ku dhawaaqay Hadal Dad Badan soo jiitay..
Jul 16, 2016 - Comments off
Ururka Dhalinyarada Dulmidiid ee wadanka Sacuudi Caribaya aya xalay kullan Ballaran ku yeeshay Caasimadda 2 Labaad ee Dalka Sasuudiga ee Jiddah.
Kullanka ayaa waxaa ka soo qeybgalay dhamaan xubnaha ururka oo ay ugu horeeyaan Gudoomiyaha ururka Dulmidiid Cabdullahi Cali Afarre iyo Xasan Kenya oo ah Nin aad u firfircoon jaaliyadana ka dhex muuqda.
Inta uu socday kullanka ayaa waxaa hadalo kala duwan ka jeediyay madaxda ururka iyo maarti sharaftii ka soo qeybgashay; waxa ayna kahadlay ujeedada ururka iyo faa,idooyinka laga dhaxlay inta uu socday.
Gudoomiyaha ururka Mudane Cabdullahi Afarre ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ururka uu u leeyahay dhamaan Beesha Biimaal waxa uu sidoo kale cadeeyay in cidna aysan duulaan ku ahyn balse ay ugu gargaarayaan Bulshaweynta Beesha gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka shabeelaha hoose.
Madaxda ururka ayaa fariin udiray dhamaan dhalinyarada iyo shacabka Beesha ee kukala nool dunida dacaladeeda gaar ahaan Yurub iyo America.
Sidoo kale waxa ay soo hadalqaadeen muhiimadda ay leedahay in lataageero ciidanka deegaanka iyo ilmihii Agoonta ay katageen; waxa uu tusaale usoo qaatay in ay dhawaan laxiriireen ayna sifiican u ciidsiiyeen agoomo ka mid ah mujaahidiintii kugeeriyooday dagaalka waxa uuna ahaa mujaahidkaas.
Khamiisoow Xaaji iyo marwadiisa iyo caruurta uu ifka uga tagay xamiilo.
Ururka Dhalinyada Dulmidiid ayaa maalmahanba waday dadaalo ay kudoonayaan in ay ku garab istaagaan shacabka beesha Biimaal ee ku dulman gobolada dalka soomaaliya; waxa ayna ka dhiidhiyeen dulmiga lagu hayo beesha
Waxaa kullanka goob joog ka ahaa kana qeybqaatay
1. Axmed Muraale 2. Maxamed Baakaay 3. Aweys Nuur 4. Rooble Xassan 5. Cabdullahi Yaraane 6. Cabduqaadir duuroow